Liverpool Oo Kala Xiriirtay Lazio Heshiiska Sergej Milinkovic-Savic
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay xiriir la sameysay Lazio si ay ula soo wareegaan ciyaaryahanka khadka dhexe Sergej Milinkovic-Savic .
26 jirkaan ayaa ku riyaaqay xilli ciyaareed kale oo qurux badan markii ugu dambeysay ee uu u safto kooxda reer Talyaani, isagoo dhaliyey isla markaana caawiye ka ahaa isku darka 17 gool ee Serie A
Milinkovic-Savic kuma cusba in lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Premier League, isagoo muddo dheer loo arkaayey inuu bartilmaameed u yahay Manchester United .
Wararka Maanta : Man United Oo Durbaba Wadahadalo La Qaadatay Paul Pogba Oo Ku Aadan Heshiis...
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Liverpool ayaa sidoo kale haatan xiiso u muujisay xiddiga reer Serbia ka hor xilli ciyaareedka cusub.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Reds ay u yeertay Lazio si loo hubiyo helitaanka Milinkovic-Savic.
Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale la soo jeedinayaa in kooxda Jurgen Klopp aysan diyaar u aheyn inay lacag dheeri ah ku iibsadaan ciyaaryahanka khadka dhexe, kaasoo la rumeysan yahay inuu gaari karo € 70m (£ 60m)
Hector Bellerin Oo Qaab Amaah Ah Uga Tagaya Kooxda Arsenal
Chiesa Oo Loo Magacaabay Xidiga Ciyaarta Ee Kulanki Italy Iyo Spain.
Wararka Maanta : Hector Bellerin Oo Qaab Amaah Ah Uga Tagaya Kooxda Arsenal
Wararka Maanta : Tottenham Hotspur Oo Ogolaan Doonin Harry Kane Inuu Ka Tago Xagaagan
Wararka Maanta : Abiy Ahmed oo dhaartay kadib tallaabo ay Tigrayga qaadeen iyo dagaalka...